လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲကြည့်ခြင်း …. အော် သောက်တယုတ်တဲ့လား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲကြည့်ခြင်း …. အော် သောက်တယုတ်တဲ့လား
လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲကြည့်ခြင်း …. အော် သောက်တယုတ်တဲ့လား
Posted by winkhant on Jun 16, 2012 in Copy/Paste | 49 comments
အခုတလော သောက်တယုတ် ဆိုပြီး online ပေါ်မှာ ရေးသားတာတွေအတွက်၊ post မရေးဖြစ်တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရော၊
ကျွန်တော့ရဲ့ ဒုတိယ post အနေနဲ့ရော အားလုံးပေါင်းပြီး
နဲနဲလောက်တော့ လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲကြည့်ချင်ပါတယ်။ အမှားပါရင်လဲ ခွင့်လွှတ်ဖို့ ကြိုတောင်းပန်ချင်ပါတယ်
ဖြစ်ပုံကို မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ပြီးမကြာဘူး မြန်မာအစိုးရနဲ့ တရုတ်တို့ရဲ့
ဆက်ဆံရေး တိုးတက်လာမှုက စတယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ (ဒါက ကျွန်တော့အမြင်ပါ)
တရုတ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံရာကနေ စတင်လာခဲ့တာပါ
ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်ပါတယ် တရုတ်တွေရဲ့ လာရောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုက လူတွေ အမြင်ကတ်စရာကို ကောင်းလောက်တာကိုး
အနီးဆုံးအားဖြင့် မန္တလေးမြို့တော်ဟာ တရုတ်လူမျိုး များပြားလာတဲ့ မြို့တော် ဖြစ်လို့လာပါတယ်
အဲ့ဒီအတွက်လဲ နေရာတိုင်း တရုတ်၊ အစိုးရ project မှာလဲ တရုတ်၊ စီးပွားရေးဈေးကွက်မှာလဲ တရုတ်၊ ဟိုနေရာ တရုတ် ဒီနေရာ တရုတ်ဆိုတော့
ကြာလာတော့လဲ အမြင်ကတ်လာရာကနေ တယုတ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါပဲ
သောက်တယုတ်ဆိုပြီးတော့ မပြောသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်
နိုင်ငံတစ်ခုက တစ်ခြားနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာ လာရောက်ရင်းနှီင်္း လာရောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံပြီဆိုကတည်းက အလှူအတန်းလုပ်ဖို့ ရောက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး
ကိုယ်ကျိုးအတွက် သူများနိုင်ငံမှာ စီးပွားလာရှာတာပါ ဒီ့အတွက် သူတို့အနေနဲ့ ရနိုင်သလောက် ရအောင် အများဆုံးယူပြီး
တတ်နိုင်သလောက် လုပ်အားခအပါအ၀င် လျော့နိုင်သမျှ လျော့ပြီး ပေးနိုင်ဖို့ကိုပဲ စဉ်းစားမှာပါ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတွေအနေနဲ့ project တစ်ခုရဖို့ အစိုးရကို ရှယ်ယာဘယ်လောက်၊ percent ဘယ်လောက်ဆိုပြီး ပေးရတာတွေလဲရှိတော့
ဥပမာအားဖြင့် Apple Company က တရုတ်နိုင်ငံမှာ စက်ရုံထောင်ပြီး
idevice ပေါင်းစုံ ထုတ်လုပ်တယ် တရုတ်အလုပ်သမားတွေရော US ကရတဲ့ အလုပ်သမားလစာအတိုင်း ရကြပါလား။ မရပါဘူး။
ကျွန်တော်ဒီလို ရှင်းပြတယ်ဆိုတာ တရုတ်ကို ထောက်ခံအားပေးတာမဟုတ်ပါဘူး နိုင်ငံခြားက လာရောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကို ပြောတာပါ။
အခုဆိုရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ
ဒီတော့ မကြာခင်မှာ တရုတ်တင်မကပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရင် အကျိုးအမြတ်ရှိမယ်ဆိုပြီး တွက်ခြေနဲ့လာရောက်မယ့် နိုင်ငံတွေ အများကြီးပါ
အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ သောက်ကုလား၊ သောက်တရုတ်၊ သောက်ဂျပန်၊ သောက်ကိုရီးယား၊ သောက်အမေရိကန်၊ သောက်ယိုးဒယား၊ သောက်ဥရောပ ဆိုပြီး ဖြစ်လာဦးမှာပါပဲ။
အရေးအကြီးဆုံးက အဲ့ဒီ သောက် တွေမဟုတ်ပါဘူး
ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခကြေးငွေတွေ အစိုးရဆီရောက်ပြီး အစိုးရကလဲ clean government ပီသစွာ ကိုယ်ကျိူးမဖက်ပဲ ရလာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက် အသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ မလွဲမသွေ တိုးတက်လာမှာပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကလဲ ဘယ်သူတွေ လာရောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသည်ဖြစ်စေ
အရေးအကြီးဆုံးက တိုးတက်တဲ့နီုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ပဲ မဟုတ်လား
အခုတော့လဲ သောက်တရုတ်ဆိုပြီးတော့ ရှိစေဦးတော့ကွယ်
လွပ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲခွင့်ရှိခြင်းကြောင့် သဘောထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်သူများလဲ လွပ်လပ်စွာ ဆဲပိုင်ခွင့် ရှိပါကြောင်း
me too as ye c said
be h2o follow fish follow!
သောက်တဲ့သူတွေက.. ယုတ်တယ်လို့.. သူတို့ပဲ.. နင်တို့ပဲ..ခင်ဗျားတို့ပဲ.. ပြောနေကြပြီးတော့..
သောက်ပြီး.. ယုတ်တာတွေ.. လုပ်လုပ်နေကြတာ..
ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် ထောက်ခံပါတယ် ဗျို… ဒီက အရက်သောက်ရင်ပဲ အဲဒါတွေ လုပ်ရမလိုဖြစ်နေပြီ
မြန်မာ ကားတွေမှာ အရက်မူးလို. ဘလက်ကော်ဖီတိုက်တာတို.
ဖိနပ်ကလေးတွေ မှောက်သွားတာတို………. ဟေဟေဟေ… ပြရင်လဲရှင်းရှင်းပြတာဟုတ်ဘူးနော် သကြီး ဟိဟိ
ဘိလယက်လေး ထိုးပြီး အပေါက်ထဲဝင်သွားတာ
ကို winkhant ရေ ။
အဘ လည်း တရုတ် ကပြားပါကွယ် ။
အဘ လည်း ဒီ ကိစ္စတွေကို မကြာခဏ ၊
ရှင်းလင်း ဖြောင်းဖျ ပေးနေရပါတယ်ကွယ် ။
အခုမှ ကူ ရှင်းပေးမယ့်သူ ရောက်လာတော့တယ် ။
MG မှ ကြိုဆိုပါတယ်ကွယ် ။
လာထား ၁၀ …
တရုတ် မကောင်းကြောင်း ပြောတာ မကြိုက်သူတွေ ရှိပါသေးရဲ့ဗျာ
ပူးပေါင်း ပါဝင်ပါကြောင်း …
တရုတ် မ ကြိုက်သူ
“သောက်ကုလား၊ သောက်တရုတ်၊ သောက်ဂျပန်၊ သောက်ကိုရီးယား၊ သောက်အမေရိကန်၊
သောက်ယိုးဒယား၊ သောက်ဥရောပ” အစား ” သောက် ဘီယာ၊ သောက် ဘီအီး၊ သောက် ၀ီစကီ၊ သောက် ဘရန်ဒီ၊ သောက် တက်ခီလာ၊ သောက် မာတဲလ်၊ သောက် ဗောဒ်ကာ ” ဟု ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုကာ ယမကာ၏ သိက္ခာကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းကြပါစို့ ရွာသားတို့။
‘ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခကြေးငွေတွေ အစိုးရဆီရောက်ပြီး အစိုးရကလဲ clean government ပီသစွာ ကိုယ်ကျိူးမဖက်ပဲ ရလာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက် အသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်’
တလောက တရုတ်ကြီးကိစ္စပြီးတော့၊ ခု ကုလားကိစ္စ ၀င်လာတယ်။ တပြိုင်တည်းမှာဘဲ အစိုးရအနေနဲ့ကလည်း တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရင်ကြားစေ့ရေးကို မနိုင်မနင်းလုပ်နေရချိန်။ လူမျိုးရေးကိစ္စတွေက မြန်မာလိုနိုင်ငံမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ပြေလည်နိုင်မဲ့အရိပ်လက္ခဏာ မရှိသေးပါဘူး။ တနေ့ အဆင်မပြေဘူးတော့ပြောလို့မရပါဘူး။ စာရွက်ပေါ်မှာ ငြိမ်းချမ်းယုံနဲ့လည်း ဒေသခံလူထု ကျီးလန့်စာစားနေရသေးရင်လည်း မနိပ်သေးပါဘူး။
ဒီနေ့တင်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ summit ကြီးတခုလုပ်ဖို့ အစိုးရရဲ့ အမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ကမ္မကထ လုပ်မယ်လို့ကြားမိပါတယ်။ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲနိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီကြီး(၃၀၀)ကျော်တက်ကြမယ်ကြားတယ်။
လူမျိုးရေးကမြင်သာထင်သာတဲ့ နိုင့်ထက်စီးနင်းမှုလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့၊ စီးပွားရေးချုတ်ကိုင်ပြီးဗိုလ်ကျစိုးမိုးတဲ့ ၀ိသမစနစ်ကြောင့်လဲ လူထုဗိုက်ဟောင်းလောင်းဖြစ်နိုင်သေးတာကိုမမေ့ကြဘို့ပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတိုင်း၊ “အခရာ”လား “ပွဲစား”ဆိုတာကိုလဲ ကွဲကွဲပြားပြား သိရဘို့ခက်တာမို့။ MoU လေးထိုးလိုက်ရင်ဘဲ နေ့ချင်းညချင်း ရွှေမိုးငွေမိုးရွာမယ်လို့ဆိုလို့မရရေးချမရပါ။ ဒီလိုကျားလား၊ နဂါးလားမသိနိုင်တဲ့ အရေခြုံစီးပွားရေးစားဖားကြီးတွေ ကို ခေါ်ယူလာတဲ့အထဲ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာက၊ ကိုယ်ပြည်တွင်းက နိုင်ငံသားတွေလည်းပါနေသေးတဲ့ ဥပမာတွေ ရိုက်သတ်လို့တောင်မကုန်ပါဘူး။ ခံရတာကတော့ လူထုပါဘဲ။ ၀င်လာခါစကတော့ သူဌေးလိုလို နဲ့ ဟော်တယ်ကြီးတွေမှာခမ်းခမ်းနားနား နဲ့ စကားကြီးစကားကျယ်တွေ ပြောပြီး၊ သာမာန်လူနားလည်ရခက်တဲ့ ကိန်းဂဏန်ရှင်းလင်းသရုပ်ပြချက်တွေ ကြားထဲ နားယောင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် နဲ့ ၀န်ကြီးဌာနများ အိစုးရအရာရှိမင်းတွေရဲ့၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရေနဲပါးမှု၊ နောက်ဆုံး စက်ရုံတွေပိတ်ရ၊ လစာတွေအပြည့်မရတဲ့ဘ၀နဲ့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အလုပ်ပြုတ်ကြသူတွေ က ရာထောင်မကပါဘူး။
နေပြည်တော်မှာ- ပြည်ပပွဲစားတွေ၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်တွင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ရုတ်စွအဆုံးပြည်ပရောက်မြန်မာအချို့တွေ အစိုးရပိုင်း ၀င်လုံးနေကြတာဘယ်လောက်ပြားပန်းခတ်နေလည်းဆိုတာသာကြည့်ကြပါဗျာတို့။
ကိုဝင်းခန်.ရေ အစ်ကို ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးကောင်းပါတယ်ဗျာ.. ဒါပေမယ့် အစ်ကို လွပ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲခွင့်ရှိခြင်းကြောင့် သဘောထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်သူများလဲ လွပ်လပ်စွာ ဆဲပိုင်ခွင့် ရှိပါကြောင်း အဲဒီ စာလေး အတွက်ရှင်းပြပရစေ… ကျွန်တော်တို.ရွာထဲမှာ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တိုင်း လိုက်ဆဲနေတာမဟုတ်ကြပါဘူး အစ်ကို အခုက ရခိုင်ဒေသ ပြသနာကြောင့်ပါ… အဲဒီအချိန်မှာ အစ်ကို စ၀င်လာတော့ အဲလိုအတွေးတွေ စိတ်ထဲ ရောက်သွားတာပါဗျာ… ဆဲမှာမကြောက်ပါနဲ. အစ်ကိုတို.ရဲ.အတွေးတွေကို ရဲရဲရေးပါ… ဆဲချင်တိုင်းလဲဆဲလို.မရပါဘူး… ကျွန်တော်တို.သကြီးက ဥာဏ်အမျှော်အမြင်ကြီးတဲ့ သူကြီးပါဗျ (ဖားတာ ဖားတာ ဟိဟိ) စည်းနဲ.ကမ်းနဲ. ထိန်းသိမ်းနေပါတယ်….
ရွာထဲက လူကြီးများကလဲ ရွာသူ၊ရွာသားတွေကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ပြောပေးကြပါတယ်….
ကိုဝင်းခန်.ရေ ဘာမှတွေးမပူနဲ. ရဲရဲသာတွေး ရဲရဲသာရေးပါ……….
မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ကျွန်တော်က အပျော်အနေနဲ့ ထည့်ရေးလိုက်တာပါ
ကျွန်တော်ပထမဆုံးရေးတဲ့ post မှာလဲ အဲ့ဒီစာထည့်ရေးဖူးလို့ ဒီ post မှာလဲ ထပ်ထည့်လိုက်တာပါ
ပြီး တရုပ်ကြီးကို ငါဆဲလိုက်ပါအုံးမယ်
အော် အော် အော် ၀စာသားဒွေကို အားပေးလယ်လား
အရင်ပြောနှင့်ချင်တာက ကျုပ်ကိုယ်တိုင် တရုတ်ကပြားပါ
(လုပ်ပြီ.. သူပဲအမျိုးမျိုး.. မွန်ဖြစ်လိုက် ရှမ်းဖြစ်လိုက် မြန်မာဖြစ်လိုက် တရုတ်ဖြစ်လိုက်… )
တရုတ်ကိုအမြင်ကတ်ခံရတာ ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်းပါ။ မဆန်းပါဘူး။
၁-အဲဒီလူမျိုးက အလုပ်ဖြစ်တဲ့လူမျိုး။ ဟိုးအရင်ကတည်းက ရွာတရွာမှာ တရုတ်တယောက် ကုန်စုံဆိုင်တည်ပြီဆိုရင် ကျန်တဲ့မြန်မာဆိုင်တွေ ခြောက်ကပ်ကုန်တော့တာ…။
၂-အဲဒီလူမျိုးက နေရာ/အခြေအနေတော်တော်များများမှာ ရှင်သန်နိုင်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူပိုင်သိမ်းတော့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင် လုပ်ငန်းလေး လွှဲပေးရတာလောက်ပဲရှိတယ်။၊ ဒါတောင်ကိုယ်က မန်နေဂျာပြန်ဖြစ်သေးတာ။ တရုတ်တွေကတော့ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီး။ လမ်းပေါ်ရောက်သွားတော့တာ။ အပ်ချုပ်စက်ခေါင်းတလုံးကအစ လိုက်လုပြီးသိမ်းသေးတာ..။ ကြေးမီးပူကြီးတောင် ပေးလိုက်ရတယ်။(မငြင်းနဲ့နော်… ကျုပ်ကကိုယ်တွေ့ကိုပြောတာ)။
အဲဒီတော့ တရုတ်တွေက တော်လှန်ရေးမလုပ်ပါဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးတွေလဲမတောင်းဆိုဘူး…။ အလုပ်လုပ်ရင်းထမင်းစားရင်းနဲ့ပဲ မျိုးဆက်တဆက်အတွင်းမှာ မြို့မျက်နှာဖုံးတွေ ပြန်ဖြစ်လာတာ..။ ကိုယ့်အဖေဆင်းခဲ့ရတဲ့အိမ်ကိုပြန်ဝယ်ပြီး ဆယ်ဆကောင်းအောင် ဆောက်ခဲ့ကြတာ…။
၃-အဲဒီလူမျိုးအများစုက အလုပ်ဖြစ်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကလွဲပြီး အခြားစည်းကမ်းစံချိန်စံညွှန်းတွေကို သိပ်အလေးမထားဘူး။ အဲဒါကြောင့် တရုတ်ပစ္စည်းတွေညံ့ပြီး မယုံနိုင်အောင်ဈေးပေါတာ..။ ကုန်ပစ္စည်းစံချိန်စံညွှန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ သဘာ၀၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်း အားနည်းတဲ့နေရာတွေမှာ တရုတ်တွေကြောင့် ထိခိုက်မှု့ရှိတတ်တယ်။ (တကယ်တော့ ဘယ်သူလုပ်လုပ်ထိခိုက်မှု့ရှိတာပါ)
ကောင်းပါပြီ ။ အမြင်ကတ်ကြပါစေ ။ တရုတ်တွေကတော့ သူများကို အမြင်ကတ်တယ်ဆိုတာ တော်တော်ရှားတယ်။
လုပ်စရာရှိတာလုပ်နေကြတာပါပဲ..။ အကြောင်းအကျိုးသဘောရ ဖြစ်ရမယ့်ဟာ ဖြစ်သွားတာပါပဲ..။
ပုတ်သင်ညို အပျိုလိုချင် ဆိုသလိုလို
ပြောတာတွေ မမှားပါဘူးဗျ..အဲမှန်တဲ့ လို့ လဲပြောလို့ မရပါဘူး.. ပြောချင်တာက နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ က တခြားတစ်နိုင်ငံမှာ လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး ဆိုရင် အလှူအတန်းပေးတာမဟုတ်ပေမဲ့..ထိုနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူ့ အကျိုးကို အများကြီးကြည့်ရပါတယ်ခင်ဗျ..ဥပမာ တရုတ်လို ပေါ့ဗျာ..တပြည်သူလုံးက မလုပ်စေ့ချင်တဲ့ ရေတာကာမျိုးကို တပြည်သူလုံးက မုန်းနေတဲ့ အစိုးရနဲ့ ပေါင်းပြီး.. ဒီရေတာကာဆောက်လို့ ပြည်သူတွေ ခံစားရမဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ခံစားချက်တွေကို သောက်ဂရုမစိုက်ပဲ လုပ်..ပြီးတော့ အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ သယံဇာတတွေကို ဈေးချိုချိုနဲ့ တရုတ်ကို ပြန်သည်.ဆိုတော့ကာ ဒီတချက်နဲ့ တင် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ တွေက တရုတ်တွေကို တင်းသင့်နေပြီဗျ..သောက်တရုတ်လို့ ခေါ်တာ က တော့ ဒေါသထွက်လို့ ခေါ်တာပါဗျား.ပြီးတော့ တရုတ် ရဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ မှုတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုတွေ အတွက် ဘာအကျိုးအမြတ်တွေများရခဲ့ သလဲ.. (ဒါကတော့မင်းတို့ အစိုးရ သောက်သုံးမကျလို့ လို့ တော့မပြောပါနဲ့ ဗျာ).ကလေးဆော့စရာ ကော်ပတ်ရုပ်တွေနဲ့ ဈေးချိုချို တရုတ် စက် အစုတ်တွေပဲမလား.(တရုတ်စက်တွေ မစုတ်ပါလို့ လဲ မပြောပါနဲ့ ခင်ညာ). ပြီးတော့ တရုတ်သည် မိမိအကျိုးအတွက်သာ ကြည့်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်..ဟိုးအရင်ကတည်းက..မြန်မာရဲ့ အိမ်နီးချင်းကောင်းမပီသခဲ့ပါဘူး..ဗမာအစိုးရနဲ့ မတဲ့ ခင်တုန်းက…ဗကပ တို့ ဝ တို့ စတဲ့ လက်နက်ကိုအဖွဲ့ တွေနဲ့ အလုံးအရင်းစစ် အကူအညီပေးခဲ့ လို့ ကျွန်တော်တို့ စစ်တပ်က ဘက်လောက် အသက်တွေရင်းပီးတိုက်ခဲ့ ရ လည်းဆိုတာ လည်းအားလုံးသိကြပါတယ်ခင်ဗျ..အဲ နောက်တော့ ဗမာအစိုးရလည်း စီးပွားရေး အပိတ်ခံရတော့ သူက မြန်မာနိုင်ငံထဲကို အလုံးအရင်းနဲ့ လာပြီးစီးပွားရေးလုပ်ချင်တော့ကာ..အစိုးရနဲ့ တည်အောင်ပေါင်းပါတယ်.ပြီးတော့ ရသမျှကိုယူနေခဲ့ တာ ခုထိပါ..ဒါတောင်မှ ခု မြန်မာ ပြည်က သူ့ ကို နည်းနည်းခွါလာတော့…ဟိုတလောက ကေအိုင်အေ စစ်သားတွေကိုတရုတ် က ဆေးရုံတွေမှာ ဆေးကုပေးထားတယ်ကြားတယ်..ပြီးတော့ ၀ စစ်တပ်ကိုလည်း အကြီးအကျယ် ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်..စစ်လက်နက်တွေရောင်းတယ်. ကဲ ကျွန်တော်တို့ သောက်တရုတ်လို့ မပြောသင့်ဘူးလားခင်ဗျာ…
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီ လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့် တရုတ်လူမျိုး မုန်းတီးရေး တော်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ သိပါတယ်
တရုတ် ရဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ မှုတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုတွေ အတွက် ဘာအကျိုးအမြတ်တွေများရခဲ့ သလဲ.. (ဒါကတော့မင်းတို့ အစိုးရ သောက်သုံးမကျလို့ လို့ တော့မပြောပါနဲ့ ဗျာ). ကလေးဆော့စရာ ကော်ပတ်ရုပ်တွေနဲ့ ဈေးချိုချို တရုတ် စက် အစုတ်တွေပဲမလား.(တရုတ်စက်တွေ မစုတ်ပါလို့ လဲ မပြောပါနဲ့ ခင်ညာ).
ကိုဟိန်းထက် ပြောသလို အစိုးရပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှမပြောဘူး
ဈေးချိုချိုတရုတ်စက် အစုတ်တွေဆိုတာကတော့ တရုတ်က မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သီးသန့် တင်ပို့တဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ အဲ့ဒီ ပစ္စည်းတွေဆိုတာကလဲ မြန်မာနိုင်ငံက ကုန်သည်တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီ ပြန်ပို့ပေးတာကို ဆိုလိုတာပါ။
တရုတ်ပြည်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလှမ်းသာမှာ မရဘူးမရှိဘူး ဈေးနှုန်းဆိုတာလဲ မကိုက်ဘူးဆိုတာ မရှိစေရဘူး အဲ quality တော့ ကွာမယ် ဘာနာမည်နဲ့လိုချင်လဲ အကုန်လုပ်ပေးတယ် quantity အနည်း အများ ဘာမှ ကိစ္စမရှိဘူး အကုန်ရစေရမယ် သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်က Made in China ဆိုတာတွေ များများထုတ်နိုင်ဖို့ပါပဲ ကိုဟိန်းထက်ပြောသလို တရုတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘာမှ အကျိုးအမြတ်ရသလဲဆိုရင်
အရေးအကြီးဆုံး ပစ္စည်းက စပြောမယ်နော်
ဖယောင်းတိုင် အစားထိုး LED မီးအိမ်များ (သိပ်မခံဘူးမပြောနဲ့နော် ဖယောင်းတိုင်ဖိုးနဲ့ မီးအိမ်ထပ်ဝယ်ရတာ ဘာမှမကွာဘူး တွက်ကြည့်
LCD TV, DVD, EVD, Home Theater, Air Con, အ၀တ်လျှော်စက် စသဖြင့် ကြိုက်တဲ့ ယိုးဒယား၊ ဂျပန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့် လူတိုင်း သုံးနိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်း တစ်လုံးပျက်သွားလို့ နောက်တစ်လုံး အသစ်ပြန်ဝယ်လိုက်ဦး ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး
Laptop, Computer accessories တရုတ် Brand နဲ့ ကြိုက်တာယှဉ်ကြည့် ဈေးမကွာရင် အဲ့ဒီဆိုင်ကို သွားပြီး မီးရှို့
ကလေးကစားစရာတွေ ခိုင်တော့မခိုင်ဘူး လှတာတော့ လှတယ် ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက မဆော့ခဲ့ရတဲ့ ကစားစရာတွေ ဈေးပေါပေါနဲ့ ကလေးတွေဆော့နေတာ လက်တွေ့
ပုံနှိပ်မှင်ကိုလဲ ကြည့်လိုက်ဦး ဂျပန်မှင် ကိုရီးယားမှင်ဈေးနဲ့ တခြားစီ သုံးဆ တစ်ဆလောက်အကွာကြီး Quality ကိုမပြောဘူး ဈေးကိုပဲပြောသည် တရုတ်မှင်သုံးနေတဲ့ ပုံနှိပ်စက်တွေ အများကြီးမှ အများကြီး
နောက်အများကြီးပြောဖို့ ကျန်ပါသေးတယ်ဗျာ ပြောလိုက်ရင် တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်တောင် ငိုသွားမှာစိုးလို့
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက ကျွန်တော်ဒီ Post ကိုတင်တယ်ဆိုတာ လူမျိုးရေးခွဲခြားရေး နိုင်ငံရေး ဘာတစ်ခုမှ မပါပါဘူး ကျွန်တော့ရဲ့ ဆိုလိုရင်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်ဆို Oversea investment တွေလာတော့မယ် တရုတ်နဲ့တင်မကဘူး လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ ဆက်ဆံရတော့မယ် ဒီ့အတွက် ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခကြေးငွေတွေ အစိုးရဆီရောက်ပြီး အစိုးရကလဲ clean government ပီသစွာ ကိုယ်ကျိူးမဖက်ပဲ ရလာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီး ဒီ Post ကို တင်တာပါ တခြားဘာမှမပါပါဘူး
တရုတ်ကိုဆော်တော့လဲ နဲနဲတော့ နာတာပေါ့လေ
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ…ကျောချခံနေရပါတယ် ခင်ဗျာ…
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ….ဓါးရိုးကမ်းသူများ ကြောင့်ခံရတာပါ ခင်ဗျာ့။
အိမ်နီးနားချင်း ဆိုတာကျွန်မတို့မှာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မှ မရှိတာတဲ့…ခင်ဗျာ့။
အိမ်နီးနားချင်း တရုတ်ကြီး မြန်မာပြည် အပေါ် မယုတ်ဖို့ ဆုပန်နေ ရပါတယ်ခင်ဗျာ့..
သောက်သုံး မကျတဲ့ လူတွေလဲ သောက်သုံး ကျကြပါ ခင်ဗျာ့..
လူသားဟာ အဲသလောက် မယဉ်ကျေးသေးပါဘူး..။
အိမ်နီးချင်းကောင်း… တို့ မိတ်ဆွေကောင်း… တို့ ဆိုတာ စကားလှအောင်ပြောတဲ့နေရာမှာ ထည့်ပြောတဲ့ ဝေါဟာရမျှသာပါပဲ..။
လက်တွေ့မှာတော့ တခုထဲကိုပဲ အကြောင်းပြုပါတယ်..
အဲဒါက- အကျိုးစီးပွား ပါ..။
ဒါကြောင့် မုချသဘော အမြဲအမှန်သဘောနဲ့ပြောရရင်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘယ်အိမ်နီးချင်းမှ အိမ်နီးချင်းကောင်းမဟုတ်ပါဘူး..
တကယ်တော့ ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ အိမ်နီးချင်းမှလဲ အိမ်နီးချင်းကောင်းမဟုတ်ပါဘူး..
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအားလုံးနဲ့ ဘုံ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်မယ့်ကိစ္စတွေ များနိုင်သမျှများအောင် ဖန်တီးရပါမယ် ။ အဲဒါနဲ့ ချည်ရတာပါ…။
တကမ္ဘာလုံးနဲ့ ခြုံကြည့်ရင်တော့ တရုတ်ကို လဲ ထိန်းဘို့ လိုပါပြီ…။
ဒါပေသိ- ဆင်ကို ထိန်းတဲ့ကိစ္စက ဆင်-ဆင် ချင်းပဲ လုပ်ရတာ..။
ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်လှဆိုသလို ပြောစရာရှိတာ ပြောကြတာပေါ့။
အားတိုင်းဆဲနေတဲ့ ဆိုဒ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
၀င်ဖတ်နေကျ ဆိုရင် အကြောင်းသိမယ် ထင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို အခေါ်မခံချင်ရင် သူ့ဆီက ရတဲ့ အကျိုးဆိုတာရယ် ဒီကပေးလိုက်ရတာလေးတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရေးစေချင်ပါတယ်။
ဘယ်သူက ဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးတွေလည်း ကြုံရင်ရေးပါအုန်းရှင့်။
ဒီနေရာမှာ အခေါ်အဝေါ်လေးတွေ အကြောင်း နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ ကျမ ပြောတာ ဒီမြေမှာမွေး ဒီမှာကြီးတဲ့ တရုတ်တွေကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ (မပြောဆို အနာဂတ်ရဲ့ ကျမတူလေး သို့ တူမလေး က ကပြားလေးဖြစ်မှာပါ)
ချိင်းနားက လာတဲ့ ချိုင်းနီးစ်တွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဆိုတဲ့ လူတွေအကြောင်းရောပေါ့။ ရေးပါအုန်း။
Pooch ခင်ဗျား ကိုဟိန်းထက်အတွက် reply လုပ်တဲ့အထဲမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးပြီးပါပြီ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖတ်စေချင်ပါတယ်
(တရုတ်တွေကတော့ သူများကို အမြင်ကတ်တယ်ဆိုတာ တော်တော်ရှားတယ်။
လုပ်စရာရှိတာလုပ်နေကြတာပါပဲ..။ အကြောင်းအကျိုးသဘောရ ဖြစ်ရမယ့်ဟာ ဖြစ်သွားတာပါပဲ)
တရုတ်တွေကတော့ သူများကို အမြင်ကတ်တယ်ဆိုတာ တော်တော်ရှားတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆင်ကြံ တော့ ကြံ တယ် နော်။
တရုတ် စကား ပုံ တခု ရှိတယ်၊ဆင်းရဲ တာနဲ့စာရင် သေတာကပို ကောင်းတယ်တဲ့ဗျ ၊ ဒါကြောင့် ထင်ပါရဲ့၊၊၊ သူတို့ သေမလောက် ကြောက်တဲ့ ဆင်းရဲမှူ့ ကလွတ်အောင် ကောင်းတာ မကောင်း တာ ဘာမှ မစဉ်းစားပဲ အကုန်လုပ်တယ်၊ သူ့ နိုင်ငံ မှာတော့ မသိဘူး၊ကျုပ် တို့ နိုင်ငံ မှာတော့ လုပ်တယ်၊ မြန်မာ ပြည်ထဲကို ခုနောက်ပိုင်း ဝင်လာတဲ့ တရုတ် တွေ က နဂါး တွေ ဟုတ်ဘူးဗျ၊ မြွေ အကြီး စားတွေ ၊
ကိုဝင်းခန့်က တရုတ်ဘက်ကနာတယ်ဆိုတော့ ဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေတာလဲ မေးပါရစေ။ တရုတ်မို့လို့ နာတယ်
ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီး မြန်မာလူမျိုးလို့ မခံယူတာလား ?? ဒါဆိုရင်တော့ တရုတ်ပြည်မှာပဲနေသင့်ပါတယ်။
တရုတ်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ခံစားလို့
ရပါတယ်။ ကိုဝင်းခန့်လည်း မြန်မာမှာမွေး/ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီး တရုတ်ဘက်ကနာနေတယ်ဆိုတာ ဖြစ်သင့်ပါ
သလား။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလိုလူမျိုးနိုင်ငံသားတွေရှိနေတာ တိုင်းပြည်နစ်နာပါတယ်။
ပြောတာနဲနဲလွဲနေတယ်ထင်တယ်၊ လူမျိုးဆိုတာပြောင်းလို့မှမရတာ၊ တရုတ်လူမျိုးက ဘယ်နိုင်ငံမှာဘဲ နေနေ၊ ဘယ်နိုင်ငံမှာဘဲ မွေးမွေး တရုတ်လူမျိုးပါဘဲ။ ခုဟာက phaung phaung က နိုင်ငံသားနဲ့ လူမျိုးကို မကွဲပြားဘူးဖြစ်နေတယ်နဲ့တူတယ်။ ကိုဝင်းခန့် က တရုတ်လူမျိုးဖြစ်နေလို့ တရုတ်ကိုပြောတာမခံနိုင်ဘူးဆိုတာလက်ခံပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို တိုးတတ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင် ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံသားခံယူချင်ရင် ပေးရမှာဘဲ၊ ( ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတော့မပေးနဲ့ပေါ့ဗျာ။) စင်ကာပူမှာဆိုလည်းဒီလိုဘဲလေ၊ ဝါးလုံးရှည်ကြီးနဲ့ ယမ်းတာတော့ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ပါဘူး။ ထောက်ခံပါတယ်။
ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာကို သေချာဖတ်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ် ကျွန်တော်ရေးတဲ့အထဲမှာ တရုတ်ကို ထိလို့ နာတယ်ဆိုတဲ့စကား တစ်ခုမှမပါပါဘူး သောက်တယုတ် ဆိုပြီး မခေါ်သင့်ဘူး အဲ့ဒါပဲ ပါပါတယ် ကျွန်တော်က မြန်မာနိုင်ငံသား လူမျိုးကျတော့ တရုတ်လူမျိုး အဲ့ဒါက ပြောင်းလဲလို့မရဘူး ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့ ဆိုလိုရင်းက post နောက်ဆုံးမှာ ပါပါတယ်
လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်
ရိုဟင်ဂျာနဲ့.. ဘင်္ဂလီနဲ့.. ကုလားနဲ့..မွတ်ဆလင်နဲ့တွေလို.. နောင်တချိန်.. စာသား..စကားဇတ်လမ်းတွေရှုပ်လာမှာစိုးသမို့.. ကျုပ်က..
မြန်မာပြည်ထဲမွေးတဲ့.. စိန့်တိုင်းသားနွယ်တွေကို.. တရုတ်လို့ခေါ်ကြမယ်ဆို… ဂန္ဓာလရာဇ်.. စိန့်တိုင်းပြည်ကို.. ချိုင်းနားလို့ခေါ်သင့်တယ်.. အဲဒီကလူတွေကို.. ချိုင်းနီးစ်လို့ခေါ်သင့်တယ်လို့.. ပြောခဲ့ဖူးတယ်..
တရုတ်သည်.. မြန်မာပြည်ပေါက်.. စိန့်တိုင်းသားနွယ်တွေ..
ချိုင်းနီးစ်သည်.. (China)ချိုင်းနား(စိန- Sino)တိုင်းပြည်\_နိုင်ငံသား.. လူမျိုး..
သူကြီးရေ ဘယ်နှိုင်ငံမှာမွေးမွေး ကိုယ်နိုင်ငံကို အကျိုးပြုရင်ကောင်းတဲ့သူပါဘဲ။
ချိုင်းနီးစ်တွေကို တရုတ်တွေလဲ စိတ်ပျက်နေပါတယ်။
ချိုင်းနီးစ်တွေဒါဏ်ကို တရုတ်တွေလဲ ခံရ လို့ ချိုင်းနီးစ်တွေ နယ်ပယ်စုံထိုးဖေါက်လာမှာကို တရုတ်တွေလဲ ကိုယ့်ထမင်းအိုးလေးတွေကိုငဲ့ပြီး မျက်စိသူငယ်နဲ့ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
တနေ့က တူလေးတယောက် လမ်းမှာရောင်းတဲ့ သစ်တိုသစ်စလေးတွေကို ကော်ကပ်ဆေးသုတ်ထားတဲ့ အိမ်ပုံအရုပ်လေးလိုချင်လို့ ၀ယ်ပေးတော့ ၂၅၀၀ ကျပ်ပေးရပါတယ်..။ သေးတဲ့ ပြူတင်းပေါက်မပါတာက ၁၈၀၀ တဲ့..။
အဲဒီပိုက်ဆံလောက်နဲ့ဆို ချိုင်းနားကလာတဲ့ ချိုင်းနီးစ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ ချိုင်းနားကစားစရာဝယ်ရင်…-
အသံစုံတွေထွက်၊ သီချင်းတွေပါ၊ မီးတွေတဖြတ်ဖြတ်လင်းပြီး ဘာသာစကားသုံးမျိုးလောက်တောင် ပြောင်းပြောတဲ့အရုပ်မျိုးရတယ်….
ဒါက ကလေးကစားစရာချင်း ယှဉ်ပြတာပါ…
လူကြီးကစားစရာချင်းကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ယှဉ်ကြပါ….
သူတို့ကိုလဲ (ဆဲချင်ရင်) ဆဲပြီး တဖက်ကလဲ ကိုယ့်နိုင်က ဈေးကွက်ဝင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ ဘယ်အရာမျိုးမဆို ထုတ်လုပ်ယှဉ်ပြိုင်ဘို့ စဉ်းစားကြပါ…။
သယံဇာတကို မရောင်းချင်ရင် တခြားဟာရောင်းစရာရှိအောင် လုပ်ကြပါ မြန်မာပြည်သားတို့…..။
သူတို့ကိုလဲ (ဆဲချင်ရင်) ဆဲပြီး တဖက်ကလဲ ကိုယ့်နိုင်ငံက
ကိုယ်တိုင် တိုးတက်အောင်မကြိုးစားပဲ သူတစ်ပါးကို လိုက်ပြီး မကဲ့ရဲ့သင့်ပါဘူး
ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံမှာ 1982 ကမွေးပြီး အခုထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ် တရုတ်လူမျိုးဆိုတာ ပြင်လို့မရတော့ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်တော့ ဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်တင်တဲ့ post ရဲ့ဆိုလိုရင်းကို တချို့လူတွေ သဘောမပေါက်ကြတာ ခက်တယ်
သဘောတရားက စဉ်းစားကြည့်ရင် ရှင်းရှင်းလေးပါ
(1) တရုတ်လူမျိုးတွေ ဘာလို့ဝင်လာသလဲ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးလုပ်ကွက်ကောင်းလို့ဝင်လာတယ် (မ၀င်စေချင်ရင် အစိုးရက ခွင့်မပေးနဲ့ ဒါဆိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ ၀င်လာမှာလဲ)
လ၀က အစိုးရ အစရှိတဲ့ အရာရှိတွေကို ငွေနဲ့ဖို့ပြီး ၀င်လာတယ် (သူတို့သာ သမာသမတ်ရှိမယ်ဆိုရင် မြန်မာစကားမပြောတတ်တဲ့ တရုတ်ဆိုတာ ရှိမှာတောင်မဟုတ်ဘူး)
(3) ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အိမ်တွေ မြေတွေဝယ်ကြလဲ
ငွေမတန်တဆပေးပြီး လိုချင်တဲ့ ဈေးကွက်ကျတဲ့နေရာကို ၀ယ်ကြတယ် (မန္တလေး အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကို ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်)
မြန်မာတွေဆီက၀ယ်တယ် (မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ငွေဘယ်လောက်ပဲရရ တရုတ်ကိုမရောင်းဘူးဆိုတဲ့ အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်သာထားနိုင်ရင် တရုတ်တွေပိုင်ဆိုမှုဆိုတာ လက်ညှိုးထိုးပြလို့ မရနိုင်ဘူး)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ငွေနဲ့ ၀ယ်တယ် (မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတောင် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရတဲ့ လုပ်ကွက်တွေရတော့လဲ …… ဒါကို ဆက်မရေးချင်တော့ဘူးဗျာ)
(6) တရုတ်တွေအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ဘယ်သူတွေက ချပေးနေလဲ
အစိုးရဘက်ကလူတွေပဲ (သူတို့သာ မြန်မာနိုင်ငံက လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဆီ ချပေးကြည့် တရုတ်တွေ အနားတောင် မကပ်နိုင်စေရဘူး Hotel ခကုန်ပြီး ပြန်သွားစေရမယ်)
(7) တရုတ်တွေကရော လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို အလကားယူတာလား ဒါမှမဟုတ် အောက်ဈေး ဒါမှမဟုတ် တန်ရာတန်ကြေးပေးပြီး ယူနေတာလား
တန်ရာတန်ကြေးမဟုတ်ရင်တောင် အောက်ဈေးတော့ ပေးမယ်ထင်တယ် (အသေးစိပ်မသိတော့ မပြောတက်ဘူး)
(8) မြန်မာနိုင်ငံက တရုတ်အတွက် ပေးလိုက်ရတဲ့ သယံဇာတတွေအတွက် ပြန်ရတဲ့ငွေတွေ ဘယ်တွေရောက်ကုန်သလဲ
(9) အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
သန့်ရှင်းတဲ့ Clean Government လိုတယ် တရုတ်တွေရဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားဖို့လိုတယ် နေရာတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရပြီဆိုရင် တရုတ်တွေကို ပြန်နှင်မထုတ်ရင်တောင် သူ့အလိုလို ပြန်သွားကြမှာပါ ကျွန်တော့ဆိုလိုရင်းက ဒါလေးပဲ
ဟုတ်ပါတယ် အစ်ကိုရေ..ပြန် reply လုပ်ပေးထားလို့ ကျေးဇူးပါ..ကျွန်တော်လည်း like လုပ်လိုက်ပါတယ်.:D.. အစ်ကို ပြောသလို ပါပဲ ဟုတ်ပါတယ်..တရုတ်လုပ်တွေ ဈေးပေါတယ်..ကွာလတီတော်တော်စုတ်ပါတယ်…အစ်ကိုပြောသလို က ဖယောင်းတိုင်နဲ့ ပဲယှဉ်လို့ ရမယ်..ကျန်တဲ့ ကိုရီးယားထုတ်၊ ဂျပန်ထုတ်.စသည့် တို့ နဲ့ ယှဉ်လို့ တော့မရပါဘူး..တရုတ်သည် မြန်မာ နိုင်ငံကို တင်သည့်အခါ ညံ့ပေ့ဆိုသည့် ကွာလတီတွေကို သာတင်ပို့ တတ်ပါတယ်.(ကျွန်တော် ခု ကိုရီးယားမှာ နေရင်း ကိုရီးယားကို ၀င်တဲ့ တရုတ် လုပ်တွေကိုကြည့်တဲ့ အခါမှာ.တော်တော် ကို ကောင်းတာကိုတွေ့ ရလို့ ပါ)..အစ်ကိုပြောတာဟုတ်နိုင်ပါတယ်..ဒီကပေးနိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းအတိုင်းပေးတယ်ဆိုတာ..အဲတော့ကာ.. ကျွန်တော့် တို့ ပြည်သူတွေသည်.ဘာလို့ ဒီအစုတ်ပလုပ်တွေကိုပဲ သုံးနေရပါသလဲ..ဆိုတော့ကာ..မြန်မာတွေဆင်းရဲတယ်..ဈေးကြီးပေးပြီး ကွာလတီကောင်းကောင်းတွေ မသုံးနိုင်ဘူး..အရင်က (တရုတ်က လွဲလို့ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံအားလုံးနီးပါးက စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ ထားတုန်းက) ပိုဆိုးပါတယ်..အဲတော့ အဓိက အကြောင်းအရာက ဆင်း၇ဲ လို့ .. ဘာလို့ ဆင်းရဲ လဲ..မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ အာဏာရှင် တွေ..ပြည်သူတွေ အမုန်းဆုံး အရွံ့ ဆုံးလူတစ်ခုကြောင့်လို့ ပြောရင်ရပါတယ်..ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်ညှင်းပန်း.ပြည်သူတွေ ဘ၀ကို မကြည့်ပဲနဲ့ .မိမိ ကိုယ်ကျိုးပဲ ကြည့်ခဲ့ ကျတဲ့ .ကျွန်တော်တို့ အမုန်းဆုံး အာဏာရှင်အုပ်စု ကို အဓိက အားပေးထောက်ခံခဲ့တာတရုတ်နိုင်ငံပါ…စစ်လက်နက်တွေရောင်းပေးတယ်.(အဲ..တရုတ်ရောင်းလက်နက်တွေ ဘယ်လောက်စုတ်ကြောာင်းလဲ နောက် တင်ပေးပါဦးမယ်)..ဒါပေမဲ့ ဒင်းတို့ က ပြည်သူတွေကို သတ်လို့ တော့ရသပေါ့လေ..ပိုက်ဆံချေးတယ်.အဲတော့သူတို့ က မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ .ရေနဲ့ ..ကျောက်မျက်ရတနာ..စသည့်စသည့် မြန်မာ့ သယံဇာတ တွေကို အောက်ဈေးနဲ့ ဝယ်တယ်(အတိအကျသိချင်ရင်ပြောပါ..ကျွန်တော် ထပ်တင်ပေးမယ်)..အဲဒီရောင်းလို့ ရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကလည်း အာဏာရှင်တွေ အိတ်ထဲပဲဖြစ်ဖြစ်…သူတို့ ဆီက ၀ယ်တဲ့ စစ်လက်နက်(တော်တော်စုပ်နေတဲ့ ဟာတွေ)နဲ့ ချေလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်.ဖြစ်သွားပြီး.ပြည်သူတွေအတွက် ရေရေရာရာ အကျိုးမရှိ(တရုတ်က ဒါတွေကို တော့မသိပဲမနေလောက်ပါဘူးနော) ဖြစ်သွားပါတယ်.ပြီးတော့ တရုတ်စီးပွါးရေးသမားတွေအများကြီးဝင်လာပြီး(အောက်လမ်းနဲ့ ) စီးပွါးရေးတွေဖြစ်.ပြီးရင်တရုတ်ကိုပြန်ပို့ (တကယ်ပို့ တာနော်)..ပြည်သူတွေအတွက် အဖတ်တင်တာက တော့ .ရှေးမြန်မာ ဘုရင်တွေနေတဲ့ မန်းတလေးမြို့ ကြီးရဲ့ ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ နေရာမှာ တရုတ်တွေအကုန်ရောက်ကုန်ပြီး..မြန်မာလူမွဲတွေကတော့….ဆင်ခြေကုန်းတွေမှာ နေရာယူလိုက်ရခြင်းပါ..မြန်မာ ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးကိုလုံးဝလှစ်လျှူရှူ့ လိုက်တာပါ.အဲတော့မြန်မာ တွေထဲ မှာ သူတို့ ကိုေ-ာက်ညင်မကတ်တဲ့လူဆိုလို့ အာဏာရှင်တို့ တသိုက်ပဲရှိမယ်….ကျွန်တော်က ခင်ဗျားကိုတိုက်ခိုက်တာလုံးဝမဟုတ်သလို ..တရုတ်မုန်းတီးရေးတရားဟောတာလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာ..ဒါပေမဲ့ ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ရင်တော့.ဘယ်ဗမာလူမျိုးမဆိုတရုတ်ကို တင်းမှာပဲဆိုတာနားလည်ပေးပါ..ပြီးတော့ ဒီလို တင်းထားနိုင်မှ နောက်ဆို မြန်မာ က တရုတ် စီးပွါးရေး ကျွန်ဖြစ်မယ့်အရေးကိုကာကွယ်နိုင်မှာပါ..တင်းသင့်ပါတယ်..ကြည့်နေပါ..ခုဆိုမြန်မာသည် အမေရိကန်၊ဥရောပ စသည့် အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံနေလို့ တရုတ်နဲ့ အဖုအထစ်တွေ စနေပါတယ်..ဘယ်တော့ ထတင်းကြအုန်းမလဲဆိုတာ ကြည့်နေပါ..တရုတ်သည်.ဘယ်လောက်မြန်မာနဲ့ အိမ်နီးချင်းကောင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပါစေ..ဟိုတလောက ၀ တပ်ဖွဲ့ စစ်ရေးပြပွဲမှာ…တရုတ် စစ်တပ်က အရာရှိတွေလာပီး..စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေ တိုးမြှင့်သင်ကြာပေးဖို့ ပြောကြတယ်ကြားတယ်.(၀ဆိုတာ မြန်မာ နိုင်ငံထဲမှာရှိတာနော) ဒါကြောင့် တရုတ်ကို တော့ နည်းနည်း တင်းတင်းနေသင့်တယ်ထင်ပါတယ်ဗျား.
ခဏ ခဏ ပြောနေ ရှင်းနေရလို့ ၊
အဘ ကတော့ ထပ် မရှင်းချင်တော့ပါဘူး ။
အဘ ရဲ့သဘောထားကို သိချင်ရင်တော့ ၊
အောက်က Post ထဲက ၊
အဘ Comment တွေကိုသာဖတ်ကြည့်ကြပါတော့ ။
” တို့မြေ / တို့ရေ / တို့မန္တလေး နှင့် ယုတ်ယုတ်များ ”
တခုတော့ ၊ အကြံပေးမယ်နော် ၊ ဆဲ တာလည်း ဆဲ ပေါ့ ၊
ဒါပေမယ့် ၊ အောက်ပါ စကားလေးတွေကိုတော့ ၊ မမေ့ကြပါနှင့် ။
” ချမ်းသာတဲ့ သူ တွေကို
မုန်းရင်း ၊ ဆဲရင်း ( မနာလို ဖြစ်ရင်း ) နှင့်
ပို ပို ပြီး ဆင်းရဲသွားတာပါပဲကွာ ” တဲ့ ။
” ချမ်းသာတဲ့ သူ တွေကို မကြည်ညိုပဲနှင့် ၊
ချမ်းသာတဲ့ သူ မဖြစ်နိုင်ဘူး ” တဲ့
အခု အောက်မှာ ပြန်ရေးပေးထားတဲ့ ၊
ဦးဦးပါလေရာ ရဲ့ Comment လေးကို ၊
သေသေချာချာ ဖတ်ပါ ၊ သေသေချာချာ စဉ်းစားပါ ။
အဖြေ ကို ရေးရေး တွေ့လိမ့်မယ် ။
” တရုတ်တွေကတော့ သူများကို အမြင်ကတ်တယ်ဆိုတာ တော်တော်ရှားတယ်။
( သူတို့ ) လုပ်စရာရှိတာ ( မှန်မှန် ) လုပ်နေကြတာပါပဲ..။
အကြောင်း အကျိုး သဘောအရ ၊ ဖြစ်ရမယ့်ဟာ ဖြစ်သွားတာပါပဲ..။ ”
( ဖြစ်ရမယ့်ဟာ ဖြစ်သွားတာပါပဲ = ချမ်းသာသင့်တဲ့သူဟာ ချမ်းသာသွားတာပဲ )
( တနည်း ၊ မွဲသင့်တဲ့သူဟာ မွဲသွားမှာပဲ )
foreign resdent.. ခင်ဗျား ပြောတဲ့ စကာပုံတွေက တကယ်ကောင်းပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဆင်းရဲ သူတွေ.၀င်ငွေမရှိသူတွေကို ဦးတည်ပြောချင်တာဆိုရင်တော့ ၀မ်းနည်းစိတ်ပျက် စရာပါပဲဗျာ… ခင်ဗျား သူတို့ တွေဘာလို့ ဒီလို ဆင်းရဲ နေကြလဲ..ဘာလို့ ဒီဘ၀ တွေ ကမတက်ကြသလဲ..ဘာလို့ တရုတ်လူမျိုး လူချမ်းသာတွေ ကို မုန်းတီး ကြသလဲ ဆိုတာကို နည်းနည်း စဉ်းစားကြည့်ဘူးလား..ခင်ဗျား ပြည်ပမှာနေတာလား…ပြည်ပက ငတိတွေလေတော့မလိုက်ပါနဲ့ ဗျ..ကိုယ့် တိုင်းရင်းသားတွေ.ကိုယ့်ပြည်သူပြည်သားတွေ ဘ၀ကို မ အပုတ်မချချင်းစမ်းဘာနဲ့ ..သူတို့ တွေက တရုတ်တွေကို ပဲ ထိုင် အပြစ်တွေတင်..မနာလို ဖြစ်နေပြီး..ဘာမှမလုပ်မကိုင်နဲ့ ဒီလိုပဲ ဆင်းရဲသွားလေရဲ့ တော့ ဟုတ်ဘူးဗျ..ခင်ဗျားမသိရင်နေမယ်..ကျန်တဲ့ လူတော်တော်များများနဲ့ ..ကျွန်တော်က တော့ ..မြန်မာ လူမျိုးလက်လုပ်လက်စားတွေ တစ်နေ့ ကို သုံးထောင်လောက် ရဖို့ အတွက်.ဘယ်လို ရုန်းရတာတွေ…လယ်သမားတွေ.မနက် စောစောက ထလို့ တနေကုန်လယ်ထွန်ရ..ဟော ပြီးတော့..ကိုယ့်လယ်ရေ သူများဖောက်မှာဆိုးလို့ စောင့်ရ..မျိုးချဖို့ ပိုက်ဆံက မရှိတော့ ချီးရ…အဲမိုးကမကောင်း…အစိုးရကရေမပေးဆိုရင်တော့..အဲနှစ်ဘ၀တွေပျက်..အိမ်ပေါင်..လယ်ပေါင်တွေဖြစ်..သိတယ်ဗျ..ကျွန်တော်က သူတို့ ဘယ်လို လုပ်ကိုင်နေရလဲဆိုတာပြောချင်တာ(မြန်မာကိုလာတဲ့ ပြည်ကြီးတရုတ်တွေဘယ်လို အလုပ်လုပ်ကြလဲဆိုတာလည်းပြောပါဦးမယ်ဗျား)ဟုတ်တယ်မလား..အေးလေ..ခင်ဗျားကို တရုတ်သွေးနှောလို့ မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်း တရုတ်အမျိုးသားလို့ ခံယူထားပြီဆိုရင်တော့ …ဒီစကားတွေကပြောစရာလိုပါဘူးဗျာ..
ကို hein htet ရေ
” မြန်မာ နိုင်ငံထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ သူတွေကို
ဒဲ့ကို ဦးတည်ပြီး ပြောတာပါ ”
မြန်မာ နိုင်ငံဟာ စီးပွားရေး အခွင့် အလမ်းကောင်းတွေ ၊
ရှိနေ ခဲ့ / ရှိနေ သေးတဲ့ နိုင်ငံပါ ။
မိဘ အသိုင်းအဝိုင်း ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုကလည်း မှန်ကန်မယ် ၊
ကိုယ်ကလည်း တကယ်ကြိုးစား ရိုးသားမယ် ဆိုရင် ၊
ဘဝ တစ်သက်တာမှာ သူဋ္ဌေး အငယ်စား ၊
( သိန်းထောင်ဂဏန်း နီးပါး ချမ်းသာသူ ) ဖြစ်ဖို့ ၊
အေး ၊ အဲလောက်မှ မဖြစ်လာရင် ။
၁ ။ ချမ်းသာချင်စိတ် မလုံလောက်လို့ ၊
၂ ။ ကြိုးစား အားထုတ်မှု နည်းလို့ ၊
၃ ။ နည်းလမ်း မှားယွင်းလို့ ။
တစ်ခု မဟုတ် တစ်ခု လိုနေပြီလို့ ယူဆပါတယ် ။
ဲဖြစ်ရမယ့်ဟာဖြစ်သွားတာပဲ.. အင်း အဲစိတ်ဓာတ်မျိုးကို သာ ကျူပ်တို့ ဘိုးဘွားအားလုံးမှာ မွေးခဲ့မိ ရင်မြန်မာတွေလည်း သူတော်စင်တွေ ဖြစ် မဟုတ်ရင်လည်း..မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ ရှိတော့မှာကိုမဟုတ်ဘူး…အေးဗျာ..ခင်ဗျားသာ အဲလို မြင်တတ်ပါစေဗျား
ကျနော် ပြောလိုရင်းကို ခင်ဗျား မဖမ်းမိဘူးဖြစ်သွားတယ် ။
ချမ်းသာသင့်တဲ့သူဟာ ချမ်းသာသွားတာပဲ =
ချမ်းသာမှု နှင့် ထိုက်တန်အောင် ကြိုးစားတဲ့ လူ / လူမျိုး ဟာ ချမ်းသာသွားတာပဲ ။
မွဲသင့်တဲ့သူဟာ မွဲသွားမှာပဲ =
ချမ်းသာမှု နှင့် ထိုက်တန်အောင် မ ကြိုးစားတဲ့ လူ / လူမျိုး ဟာ မွဲသွားမှာပဲ ။
ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် မြန်မာတွေကို နှိမ်တယ်လို့ ထင်စရာပါ
ဒါပေမယ့် သင်ခန်းစာယူတက်ရင် သင်ခန်းစာ အများကြီးရနိုင်မှာပါ
အရေးအကြီးဆုံးအချက်က ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ တိုင်းတစ်ပါးသားတွေ လာခြယ်လှယ်နေတာကို အော်နေမယ့်အစား
တိုင်းတစ်ပါးတွေနဲ့အပြိုင် ကိုယ်ဘယ်လို တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားဖို့ပဲ
အားအားရှိ အော်မနေကြပါနဲ့ အော်နေလို့ ဘာမှမရဘူး
online ပေါ်ကနေပြီးပဲ မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်မနေကြပါနဲ့
ဒီလိုသာဆို ဘယ်သူတွေ တိုးတက်လာမယ်ဆိုတာ သိလာမှာပါ
” အားအားရှိ အော်မနေကြပါနဲ့ အော်နေလို့ ဘာမှမရဘူး
ကိုယ်ကြိုးစားမှ ကိုယ်ရမှာပါ ”
” online ပေါ်ကနေပြီးပဲ မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်မနေကြပါနဲ့
ဒီလိုသာဆို ဘယ်သူတွေ တိုးတက်လာမယ်ဆိုတာ သိလာမှာပါ ”
ဘာ တစ်ခွန်းမှ ထပ်ဖြည့်စရာမလိုအောင် မှန်ပါတယ် ။
အင်း တစ်ယောက် က ကျတော့ ကို မြန်မာ နိုင်ငံက ဆင်းရဲ သူတွေကို ကိုယ်မကျိုးစားလို့ ဖြစ်တာတဲ့ ..အေး သူတို့ တွေဘယ်လို ရုန်းကန်နေရလဲဆိုတာ ကို မသိပဲ ပြည်ပ ထွက်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အော်နေတဲ့ ကောင်တွေကို အဲဒါကြောင့် အထဲက ကောင်တွေ က သောက်မြင်ကတ်တာနေမှာ….နောက် ပို့ စ့် ရေးတဲ့ တစ်ကောင်က တော့ နောက်ဆုံးပိတ်ဖောချသွားတယ်..ကိုယ်ကြိုးစားမှကိုရမှာ.. online ပေါ်က နေပြီးပဲ မျိုးချစ်စိတ် ထက်သန်မနေ ကြနဲ့ တဲ့..ဒါက လူတိုင်းသိပြီးသား..ဟုတ်လား..မြန်မာတွေလည်း အားလုံး အလကားထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူး..လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လူတိုင်း အားအားယားယား ထိုင်နေတာ မဟုတ်ဘူး..မနက်စောစောစီးစီး နွားနဲ့ ဖက်ရုန်းနေတဲ့ သူတွေ တပုံကြီး..မင်းကို ပဲ ပြောချင်တယ်ကွာ..မင်းလည်း တကယ်တရုတ်ကို ချစ်ရင်..အပြင်ဖက်မှာ တရုတ်ကို သောက်တရုတ်လို့ ပြောလို နာတယ်ကွာ..ဆိုပြီးအော် ကြည့်လကွာ. .. မင်း ပြည်တွင်းမှာ ဆိုရင်တော့ကာ..ဒဂုံကျောင်းမှာ လာအော်လှည့်..ဟုတ်လား.ငါ အဲလိုမပြောဘူးလို့ တော့ မငြင်းနဲ့ ပေါ့ကွာ..မင်းငါ့ကို ပြန်ပြောထားတဲ့ အထဲမှာ..တရုတ်ကို ထိတော့နည်းနည်းတော့နာတာပေါ့ဆိုတာပါတယ်..ဟုတ်တယ်နော..
အေး ဟိန်းထက် မြန်မာတွေ မတိုးတက်တာ မင်းလို စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူတွေကြောင့်ပဲ
သူ့ထဲကိုရေထည့်ရင် ရေခွက်ဖြစ်တယ် အရက်ထည့်ရင် အရက်ခွက်ဖြစ်တယ်
မင်းပြောသလို တရုတ်ကို ချစ်လွန်းလို့ အော်နေတာမဟုတ်ဘူး
တရုတ်တွေ ဘယ်လိုလုပ်သွားတယ်ဆိုတာ အော်နေဖို့မဟုတ်ဘူး
မင်းတို့က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမှုအများဆုံးတရုတ်ပဲ မြင်လို့ တရုတ်ကို အပြစ်တင်တာ
အေး နောက်များ အမေရိကန်လာလို့ သဘောမကျရင် သောက်အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်လာလို့ သဘောမကျရင် သောက်အင်္ဂလန်၊ အဲ့လိုအော်မဲ့ကောင်တွေချည်းပဲ
အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာတစ်ခုပေးမယ် သေချာစဉ်းစား
ဂျပန်ကားကို စက်မှုဇုန်တံဆိပ်ကပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွက်လုပ်သည်တဲ့
အေး အရှက်မှမရှိတာ ကြိုးစားချင်စိတ်မှမရှိတာ တိုးတက်ဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပဲ
နွားနဲ့မှ ဖက်မရုန်းရင် ဘာနဲ့ ဖက်ရုန်းမလဲ
အကွက်မြင်တဲ့ တရုတ်တွေကျတော့ သူတို့ရဲ့ နှစ်ပဲတစ်ပြားတန်တဲ့
တရုတ်ကား Grand Tiger, Cherry Wagon တွေကို စက်မှု (၁) တံဆိပ်ကပ်လဲ ကပ်
အကွက်မြင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဈေးကွက်ရတယ်
မြန်မာတွေကလဲ အမှတ်မရှိဘူး ၀ယ်လိုက်ကြတာ သောက်သောက်လဲ
သူများရောင်းတာကျတော့ မကောင်းဘူး မခံနိုင်ဘူး
ထုတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေလားဆိုတော့လဲ မကြိုးစားဘူး
မြန်မာ တွေ အဲလုပ် လုပ်ဖို့ မကြိုးစားဘူးလို့ မင်းကို ဘယ်သူပြောလဲ ဟေ့ကောင်..အေး ဟုတ်ပြီ..တရုတ်တွေ ကို အတုယူမယ်…တရုတ်တွေလို ကြိုးစားမယ်..တရုတ်တွေကို တော့ သောက်တရုတ်လို့ ဆက်ခေါ်မယ်ကွာ..ငါတို့ နိုင်ငံကို အမြတ်ထုတ်ဖို့ ပဲ ကြည့်နေလို့ …သူများထက်ကို အနိုင်ကျင့်နေလို့ .ကဲ ဒါကိုလူတိုင်းသိတယ်..မင်းငြင်းမလား..အေး.သက်သေပြဖို့ လို ရင်ပြောဟုတ်လား..ငါ ကရှင်းရှင်းပဲ..ချမ်းသာတဲ့ မိသားစုကလာတယ်..အေး ချမ်းသာပြီး ဖင်ခေါင်းကျယ်နေတဲ့ကောင်တော့မဟုတ်ဘူး..ငါ ဆင်းရဲ သားတွေ အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိပြီးသား..သူတို့ တွေမှာ ဘာ အခွင့်အလမ်းတွေ မရှိဘူးလဲ..ဘာလို့ မတိုးတက်တာလည်း ဆိုတာမင်းထက်ငါ အများကြီးသိတယ်…ခု ငါ ပြည်ပမှာ နေတယ်..ပညာသင်တယ်..ဒါပေမဲ့ ငါ့လို သွားမသင်နိုင်တဲ့ လူငယ်တွေ အများကြီးရှိတယ်..ခု ငါသင်နေတဲ့ ပညာနဲ့ ဒီလူငယ်တွေကို ဘယ်လို အခွင့်အလမ်းတွေ ရအောင် အမြဲ လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာတွေးထားပြီးသား..ဟုတ်လား..မင်းလို မြန်မာ တွေ မကြိုးစားလို့ ..တရုတ်တွေကို မနာလို ဖြစ်လို့ ..ဆိုပြီး ဖို့ ချဖို့ ငါတစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ ဘူးဘူး. မှန်တယ် ကောင်းတဲ အချက်တွေကို တရုတ်တွေဆီမှာ အများကြီးအတုယူသင့်တယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်..အေး မြန်မာ မှာရှိတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေ..မြန်မာ တွေကို ဘယ်လို သဘောထားတယ်..ဘယ်လို နှိမ်တယ်ဆိုတာလဲငါသိတယ်..အေး .အဲဒါတွေကို ငါလုံးဝသည်းမခံဘူးမှတ်..မင်းအတွက် တော့ ငါမပြောဘူး..မင်းဟာ တရုတ်ကပြား..ဒါမဟုတ် တရုတ်စစ်စစ်တယောက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်.. အေး.ငါကို တရုတ်တစ်ယောက်ပြောဘူးတယ်..ခုထက်ထိမှတ်မိတယ်ကွာ (ရွံလွှန်းလို့ )..မင်း နိုင်ငံခြားကို သွား ပြီး ဟိုကခေါင်းကြီးကြီးတွေနဲ့ သွားမယှဉ်စမ်းဘာနဲ့ တဲ့..ဒီမှာ ရှိတဲ့ ငတုံးငအတွေေ ပ်ါမှာ .စီးပွားရှာ စားစမ်းဘာကွာတဲ့ ..အဲတော့မင်းသဘောပေါက်..မင်းကို လည်း ငါအပြင်မှာ တော့ တွေ့ ဖူးချင်သေးတယ်ကွာ..
” တရုတ်တစ်ယောက်ပြောဘူးတယ်..ခုထက်ထိမှတ်မိတယ်ကွာ ( ရွံ့လွန်းလို့ )..
” မင်း နိုင်ငံခြားကို သွား ပြီး ဟိုကခေါင်းကြီးကြီးတွေနဲ့ သွားမယှဉ်စမ်းဘာနဲ့ တဲ့..
ဒီမှာ ရှိတဲ့ ငတုံး ငအတွေေ ပ်ါမှာ .စီးပွားရှာစားစမ်းဘာကွာတဲ့ ”
ဟာာာာ ၊ ကောင်းလိုက်တဲ့ အတွေးအခေါ် ။
မှန်လိုက်တာဗျာ ။ မှန်လိုက်တာဗျာ ။
အဲဒါကမှ တရုတ် အတွေးအခေါ် စစ်စစ်ပဲ ။
အဘ လည်း တရုတ် ကပြားပါ ။
ဒါပေမယ့် သတ္တိနည်း ၊ အရည်အချင်း နဲတဲ့အတွက် ၊
အပေါ်က တရုတ်ကြီးပြောသလို မစွန့်စားရဲခဲ့ပါဘူး ။
ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းရှင် သူဋ္ဌေးကြီး ဘဝ ကိုမရပဲ ၊
သူများ ခိုင်းဖတ် ၊ ဓါးမနောက်ပိတ် ဝန်ထမ်းဘဝမှာပဲ ရုန်းကန်နေရတဲ့ ၊
လူလတ်တန်းစား ဘဝကိုပဲ ရနေတာပါ ။
သူ နှင့် ထိုက်တန်တဲ့ ဘဝ ကိုပဲရမယ် ဆိုတာ အဲဒါပဲ ထင်ပါရဲ့ ။
ကိုယ့်စကားနှင့်ကိုယ် ဝဋ်ပြန်လည်နေပြီ ။ ဟီဟိ ။
အပေါ်က တရုတ်ကြီးပြောသလို စွန့်စားရဲ လုပ်ဆောင်ရဲသူများကိုတော့ ၊
ရင်ထဲ နှလုံးသားထဲက ၊ လှိုက်လှိုက်လဲလဲကို ဂုဏ်ပြု ချီးကျူးမိပါတယ် ။
အဲဒီ စကားလေးကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့
ကို hein htet ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
By the way ကို hein htet ရေ ၊
အဘ ဒီစာကို ရန်ကုန်ကနေရေးတာပါ ။
ပြီးတော့ မင်းစိတ်ထဲမှာ..မြန်မာ လူမျိုးတွေကို တကယ်တိုးတက်စေချင်လို့ ဒီ ပို့ စ်ကိုရေးတာလား..မြန်မာ လူမျိုးတွေ မွဲတေဆင်းရဲတာ..ကိုယ့်ဖာသာ သောက်သုံးမကျလို့ လို့ ကဲ့ ရဲ့ ချင်တာလား..ဒါမှမဟုတ်..တရုတ်လူမျိုးတွေကို သောက်တရုတ်လို့ ပြောလို့ နာလို့ ရေးတာလား ဆိုတာ သေချာ စဉ်းစား